ဗီးဂ - ဝီကီပီးဒီးယား
﻿ကိုဩဒိနိတ်: 18h 36m 56.3364s, +38° 47′ 01.291″
ကြယ်စုတန်း Lyra မှ ဗီးဂတည်နေရာ
18° 36′ 56.33635″
+0.026 (−0.02 - 0.07)
ဗဟိုခွာအား အလျင် (Rv) −13.9 ± 0.9 km/s
သင့်လျော် ရွေ့လျားမှု (μ) RA: 200.94 mas/yr
ပြောင်းလဲ တည်နေရာ (π) 130.23 ± 0.36 mas
အကွာအဝေး ၂၅.၀၄ ± ၀.၀၇ ly
(၇.၆၈ ± ၀.၀၂ pc)
ပကတိ အရွယ်အစား (MV) +0.582
ဒြပ်ထု 2.135 ± 0.074 M☉
အချင်းဝက် 2.362 × 2.818 R☉
တောက်ပမှု 40.12 ± 0.45 L☉
မျက်နှာပြင် ဒြပ်ဆွဲအား(log g) 4.1 ± 0.1 cgs
သက်ရောက်သည့် အပူချိန် 9,602 ± 180 (8,152–10,060 K) K
သတ္တုကြွယ်ဝမှု [Fe/H] −0.5 dex
လှည့်ပတ်အလျင် (v sin i) 20.48 ± 0.11 km/s
စတီလာ သက်တမ်း 455 ± 13 Myr
ဗီးဂ သည် ကြယ်စုတန်း လိုင်ရာတွင် အတောက်ပဆုံး၊ ညဘက်ကောင်းကင်ယံတွင် ပဉ္စမမြောက် အတောက်ပဆုံး ကြယ်ဖြစ်ပြီး မြောက်ကမ္ဘာခြမ်းတွင်မူ အာကျူးရပ်ပြီးလျင် ဒုတိယအတောက်ပဆုံး ကြယ်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် အာကျူးရပ်၊ ဆိုင်ရပ်စ်တို့နှင့်အတူ ကမ္ဘာမြေနှင့် နီးကပ်သောကြယ်ဖြစ်ပြီး အလင်းနှစ် ၂၅ သာဝေးကွာသည်။ နေ၏ အိမ်နီးချင်းမှ အတောက်ပဆုံးသောကြယ်များထဲတွင် ပါဝင်လေသည်။ ဗီးဂအား နက္ခတ္တပညာရှင်များ အထူးဂရုပြုလေ့လာခဲ့ကြပြီး နေပြီးလျင် အတောက်ပဆုံးကြယ်ဟု အငြင်းပွားသည်အထိ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ခရစ်မပေါ်မီ နှစ်ပေါင်း ၁၂၀၀၀ ခန့်ကမူ ဗီးဂသည် ဓူဝံကြယ် ဖြစ်ခဲ့ပြီး နောင်နှစ်ပေါင်း ၁၃၇၂၇ ကြာပါက ထပ်မံဖြစ်လာပေမည်။ ကြယ်၏ ရောင်စဉ်အား မှတ်တမ်းတင်ရာတွင် ဗီးဂသည် ပထမဆုံး မှတ်တမ်းတင်ခံရသည့်ကြယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယင်းသည် ကြယ်အကွာအဝေးအား တိုင်းတာရာတွင် အသုံးပြုသည့် parallax နည်းဖြင့် ပထမဆုံး တိုင်းတာသည့် ကြယ်လည်းဖြစ်သည်။ ဗီးဂသည် မိမိတို့နေသက်တမ်း၏ ဆယ်ပုံတစ်ပုံခန့်သာလျင် ရှိသေးသည်။ သို့သော် ယင်း၏ နှစ်ဆခန့်ကြီးမားသော အရွယ်အစားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရသော် ကြယ်နှစ်စင်းလုံးသည် သူတို့၏ သက်တမ်းထက်ဝက်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဗီးဂတွင် ဟီလီယမ်ထက် အမ်တမ်နံပါတ်ပိုမြင့်သည့် ဒြပ်စင်များ ရှိသည်။  ဗီးဂအား မတည်မြဲသော ကြယ်ဟုလည်း သံသယထားခံရသည်။ ယင်း၏ စတီလာ လည်ပတ်မှုသည် အီကွေတာတွင် ၂၇၄ km/s ဖြင့် လျင်မြန်စွာ လည်ပတ်နေသည်။ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ရပ်သည် ဗဟိုခွာအားကြောင့် အီကွေတာအား အပြင်ဘက်သို့ ဖောင်းကားလာစေပြီး ရလဒ်အနေဖြင့် ကြယ်၏ ဖိုတိုစဖီးယားမှ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုအား အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်။ ကမ္ဘာမြေမှဆိုသော် ယင်း၏ ဝင်ရိုးစွန်းများမှတဆင့် လေ့လာရသည်။ အနီအောက်ရောင်ခြည် ထုတ်လွှတ်မှုအား အခြေခံကာ လေလာချက်များအရ ဗီးဂတွင် ကျူးပါး ခါးပတ်ကဲ့သို့ အချပ်ပြားတစ်ခု ရှိသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ van Leeuwen၊ F. (November 2007)၊ "Validation of the new Hipparcos reduction"၊ Astronomy and Astrophysics၊ 474 (2): 653–664၊ arXiv:0708.1752၊ Bibcode:2007A&A...474..653V၊ doi:10.1051/0004-6361:20078357
↑ "Hubble Space Telescope Absolute Spectrophotometry of Vega from the Far-Ultraviolet to the Infrared" (2004). The Astronomical Journal 127 (6): 3508. doi:10.1086/420715. Bibcode: 2004AJ....127.3508B.
↑ "VizieR Online Data Catalog: General Catalogue of Variable Stars (Samus+ 2007–2013)" (2009). VizieR On-line Data Catalog: B/gcvs. Originally published in: 2009yCat....102025S 1. Bibcode: 2009yCat....102025S.
↑ Gray၊ Raymond (2007)၊ "The Problems with Vega"၊ The Future of Photometric, Spectrophotometric and Polarimetric Standardization, ASP Conference Series, Proceedings ofaconference held 8–11 May 2006 in Blankenberge, Belgium၊ 364: 305-၊ Bibcode:2007ASPC..364..305G
↑ ၅.၀ ၅.၁ "VizieR Online Data Catalog: Catalogue of Stellar Photometry in Johnson's 11-color system" (2002). CDS/ADC Collection of Electronic Catalogues 2237. Bibcode: 2002yCat.2237....0D.
↑ Fernie၊ J. D. (1981)၊ "On the variability of Vega"၊ Astronomical Society of the Pacific၊ 93 (2): 333–337၊ Bibcode:1981PASP...93..333F၊ doi:10.1086/130834
↑ Evans၊ D. S. (June 20–24, 1966)၊ "The Revision of the General Catalogue of Radial Velocities"၊ Proceedings from IAU Symposium no. 30၊ London, England: Academic Press၊ p. 57၊ Bibcode:1967IAUS...30...57E
↑ "Astrometric Studies of Aldebaran, Arcturus, Vega, the Hyades, and Other Regions" (2008). The Astronomical Journal 136: 452. doi:10.1088/0004-6256/136/1/452. Bibcode: 2008AJ....136..452G.
↑ ၉.၀ ၉.၁ ၉.၂ ၉.၃ ၉.၄ ၉.၅ Yoon၊ Jinmi; et al. (January 2010)၊ "A New View of Vega's Composition, Mass, and Age"၊ The Astrophysical Journal၊ 708 (1): 71–79၊ Bibcode:2010ApJ...708...71Y၊ doi:10.1088/0004-637X/708/1/71
↑ Aufdenberg၊ J.P.; et al. (2006)၊ "First results from the CHARA Array: VII. Long-Baseline Interferometric Measurements of Vega Consistent withaPole-On, Rapidly Rotating Star?"၊ Astrophysical Journal၊ 645 (1): 664–675၊ arXiv:astro-ph/0603327၊ Bibcode:2006ApJ...645..664A၊ doi:10.1086/504149
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ ၁၁.၂ Kinman၊ T.; et al. (2002)၊ "The determination of Teff for metal-poor A-type stars using V and 2MASS J, H and K magnitudes"၊ Astronomy and Astrophysics၊ 391 (3): 1039–1052၊ Bibcode:2002A&A...391.1039K၊ doi:10.1051/0004-6361:20020806
↑ Allen၊ Richard Hinckley (1963)၊ Star Names: Their Lore and Meaning၊ Courier Dover Publications၊ ISBN 0-486-21079-0
↑ Kendall၊ E. Otis (1845)၊ Uranography: Or, A Description of the Heavens; Designed for Academics and Schools; Accompanied by an Atlas of the Heavens၊ Philadelphia: Oxford University Press
↑ Staff၊ "V* alf Lyr – Variable Star"၊ SIMBAD၊ Centre de Données astronomiques de Strasbourg၊ 2007-10-30 တွင် ပြန်စစ်ပြီး —use the "display all measurements" option to show additional parameters.
↑ Gulliver၊ Austin F.; et al. (1994)၊ "Vega: A rapidly rotating pole-on star"၊ The Astrophysical Journal၊ 429 (2): L81–L84၊ Bibcode:1994ApJ...429L..81G၊ doi:10.1086/187418
↑ Calculation by the Stellarium application version 0.10.2၊ 2009-07-28 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
↑ Barger၊ M. Susan; et al. (2000)၊ The Daguerreotype: Nineteenth-Century Technology and Modern Science၊ JHU Press၊ ISBN 0-8018-6458-5
↑ Barker၊ George F. (1887)၊ "On the Henry Draper Memorial Photographs of Stellar Spectra"၊ Proceedings of the American Philosophical Society၊ 24: 166–172
↑ I.A.၊ Vasil'yev; et al. (1989-03-17)၊ On the Variability of Vega၊ Commission 27 of the I.A.U၊ 2007-10-30 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
↑ Peterson၊ D. M.; et al. (1999)၊ "Vega isarapidly rotating star"၊ Nature၊ 440 (7086): 896–899၊ arXiv:astro-ph/0603520၊ Bibcode:2006Natur.440..896P၊ doi:10.1038/nature04661၊ PMID 16612375
Wikimedia Commons တွင် Vega နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
Anonymous၊ "Vega"၊ SolStation၊ The Sol Company၊ 2005-11-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
Gilchrist၊ Eleanor; et al. (2003-12-01)၊ New evidence for Solar-like planetary system around nearby star၊ Joint Astronomy Centre၊ 23 September 2009 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး၊ 2007-11-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
Hill၊ Gay Yee; et al. (2005-01-10)၊ Spitzer Sees Dusty Aftermath of Pluto-Sized Collision၊ NASA/Spitzer Space Telescope၊ May 18, 2007 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး၊ 2007-11-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
Vega on Constellation Guide
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗီးဂ&oldid=721421" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။